Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Kongo, vaovao momba ny dia momba ny dia » Ny valanaretina Ebola dia nitranga tany amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo
Tapitra ny valan'aretina Ebola any amin'ny Faritany Kivu Avaratra, Repoblika Demokratikan'i Kongo
42 andro tsy misy tranga vaovao taorian'ny fitsapana farany izay ratsy fanahy
Ny CDC dia nidera ny Minisiteran'ny Fahasalamana DRC sy ireo mpiara-miasa izay nanampy tamin'ny famaranana ity valanaretina ity ny asany
Ny valanaretina Ebola farany teo dia naneho ny fahafahan'ny aretina mitohy ao amin'ireo sisa velona hanomboka valanaretina vaovao
Androany ny Ivotoerana amerikana misahana ny fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) ary ny vondrom-piarahamonina ara-pahasalamana manerantany dia nanamarika ny fiafaran'ny valan'aretina Ebola tany amin'ny Faritany Kivu Avaratra, Repoblika Demokratikan'i Kongo (RDC).
Ny Minisiteran'ny Fahasalamana DRC (MOH) sy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nanao izany fanambarana izany rehefa nahatratra 42 andro fa tsy nisy tranga vaovao taorian'ny fitsapam-pahaizana farany izay ratsy fitiliana ary navotsotra tao amin'ny tobim-pitsaboana Ebola. Ity valan'aretina Ebola ity, faha-12 an'ny DRC, dia nambara tamin'ny 7 Febroary 2021.
"Midera ny Minisiteran'ny Fahasalamana DRC sy ny mpiara-miombon'antoka izay nanampy tamin'ny famaranana ity valanaretina ity ny CDC," hoy ny talen'ny CDC, Rochelle P. Walensky, MD, MPH. “Faly izahay fa anisan'ny ezaka ary manolo-tena hanohana ny ezaka ataon'ny DRC hanampiana ireo sisa velona amin'ny valanaretina, hisorohana ny valan'aretina amin'ny ho avy, ary hamantatra haingana sy hamaly ireo tranga vaovao voan'ny Ebola. Ny fonay dia miaraka amin'ireo fianakaviana namoy havan-tiana noho io aretina mahafaty io. ”
Ny valan'aretina Ebola farany teo, anisan'izany ity iray ity, dia naneho ny fahafahan'ny aretina maharitra mitohy amin'ny fanombohana valanaretina vaovao na miteraka fifindrana vaovao sy mitohy ao anatin'ny valanaretina efa misy. Mba hahalalana bebe kokoa ireo fifandraisana misy eo amin'ireo tranga ireo sy manerana ny valanaretina, ny CDC dia nanampy ny DRC MOH hanangana laboratoara fandaminana genetika finday ao Goma ary hanohy hanome fanampiana ara-teknika satria betsaka ny fahalalana momba ny fifindran'ny firaisana amin'ny virus sy ny fiverenan'ireo tafavoaka velona.